Ilay olo-malaza milomano Bulgaria dia mijery an'i Seychelles amin'ny fanamby amin'ny filomanosana manaraka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ilay olo-malaza milomano Bulgaria dia mijery an'i Seychelles amin'ny fanamby amin'ny filomanosana manaraka
Olom-bitsy milomano Bulgarian mijery an'i Seychelles
Fantatra amin'ny rano madio madio i Seychelles, hisarika ny fahalianana iraisam-pirenena indray eo amin'ny sehatra misokatra amin'ny rano satria ny olo-malaza milomano Bulgaria Tsanko Tsankov dia naneho ny fahalianany handray ny anaran'ny atleta iraisam-pirenena voalohany nilomano teo anelanelan'ny nosy lehibe Mahé sy ny Nosy anatiny La Digue.
Tsankov dia tompon-daka nasionaly marobe ary mpitana rakitsoratra, ankoatry ny anaram-boninahitra maro hafa amin'ny tontolon'ny lomano.
Seychelles no handray ny andiany World Open Open Fédération Internationale de Natation (FINA) amin'ny volana oktobra.
Ity lomano mampihetsi-po ity dia hitondra fanatanjahan-tena, kolontsaina ary fizahantany miaraka amin'ny hetsika iray mahafinaritra.
Seychelles, firenena voalohany nampiantrano ny andian-dahatsoratry ny rano misokatra an'ny Fédération Internationale de Natation (FINA) any amin'ny faritra afrikanina, dia notadiavina hampiantrano ity hetsika misokatra amin'ny rano misokatra ity izay hatao amin'ny volana oktobra 2021.
Tsanko Tsankov dia tompon-daka nasionaly marobe ary mpitazona rakitsoratra, Tompondakan'ny Tompon'ny World FINA indroa miverina amin'ny medley 200 m manokana ary frein 400 m ary Master of Sports.
Ny hetsika dia hikendry ny hampivondrona ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ary hampitombo ny fahitana ny toerana haleha.